यसरी छुटकारा पाउनुहोस् धूम्रपानको कुलतबाट ! - Everest Dainik - News from Nepal
यसरी छुटकारा पाउनुहोस् धूम्रपानको कुलतबाट !
धूम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।
यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, शिक्षित मानिस नै धूम्रपान गरिरहेका भेटिन्छन् । चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा निकोटिन, टारजस्ता स्वास्थ्यलाई हानी पुर्‍याउने रसायन पाइन्छ ।
-वेला–वेला तलतल लागेमा लामो श्वास लिएर आफ्नो ध्यानलाई अन्यत्र मोड्ने कोसिस गर्नुहोस् ।
याे पनि पढ्नुस किन त्याग्ने धूमपान? यस्ता छन् कारण
-तलतल बढी नै लाग्यो भने प्रशस्त पानी र फलफूलको जुस पिउनुहोस् ।
-आफूलाई सकेसम्म व्यस्त राख्नुहोस् । दिमाग एकोहोरो भएका वेला धूम्रपान गर्न मन लाग्ने भएकाले मन पर्ने गीत सुन्ने, पुस्तक पढ्ने वा अन्य फेभरेट कुरा गर्ने गर्नुहोस् ।
-लत लागेका तीन–चारजनाले एकैचोटि धूम्रपान त्याग्ने निधो गरेमा सम्भव हुन्छ ।
-लतलाई एकाएक त्याग्ने । भोलि वा पर्सि छोड्छु भनेर दिन हेरेर नबस्ने । यसो गरे कहिल्यै पनि धूम्रपान त्याग्न सकिन्न । एजेन्सीको सहयोगबाट